करणलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»करणलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने !
करणलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने !
By दिपेश बिष्ट on १५ माघ २०७४, सोमबार ०६:११ हलिवुड/बलिवुड
माघ १५, करण जौहर र रोहित शेट्टी पछिल्ला दिन रियालिटी सो इन्डियाज नेक्स्ट सुपरस्टार गरिरहेका छन् । सोमा उनीहरू जजका रूपमा छन् । तर, यो सोलाई दिल्ली सरकारले एक पत्र काटेपछि करण र रोहित पनि समस्यामा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
सोमा एउटा पान मसला बनाउने कम्पनीको विज्ञापन देखाइएपछि सरकारले चेतावनीमूलक पत्र काटेको हो ।
सोबाट यो विज्ञापन बन्द नगरिएमा सबैभन्दा बढी नोक्सान करणलाई पर्न जाने समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । किनभने, करणलाई कानुन उल्लंघनविरुद्ध पत्र काटिएको यो दोस्रोपटक हो । करणले १० दिनमा पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए उनलाई पाँच वर्ष जेल र दुई हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन सक्छ ।
यसअघि करणलाई फिल्म ‘इत्तेफाक’को पोस्टरका लागि पत्र काटिएको थियो । जसमा अभिनेता अक्षय खन्ना चुरोट पिइरहेका थिए ।